Ixabiso lokuThengiswa kweNtsebenzo kubaQala-Yenza iNzuzo enkulu! Ngomhla wama-2022
Funda ngesiKhokelo sesi-2 soRhwebo ngo-2022 kwiXabiso lokuThengisa amaXabiso!
Ukurhweba ngexabiso lokurhweba kunye nebala lokurhweba ngokujingi ligcwele amaqhinga. Ngelixa abanye begxininisa scalping iinzuzo ultra-ezincinci, abanye bajonga ixesha eliphakathi. Nokuba yeyiphi na indlela – bonke banento enye abafana ngayo. Oko kukuthi, abarhwebi abanamava baya kusebenzisa izikhombisi eziphezulu zobugcisa kunye nezixhobo zokufunda itshathi.
Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kungcono ukuthatha inyathelo ubuye umva kwaye ujonge nje okuphambi kwakho-umkhwa. Oku kwaziwa njenge 'ntengiso yesenzo sexabiso'. Ngokubuyela kwiziseko-ume elona thuba lifanelekileyo lokufumana umsebenzi wakho we-Intanethi onyawo lwakho lwasekunene.
Kwesi sikhokelo, sikubonisa yonke into ekufuneka uyazi malunga nokuthengiswa kwexabiso lentengo. Ukuphela kokuyifunda, uya kuba nazo zonke izixhobo ezifunekayo ukuqala ukurhweba ngomngcipheko olungileyo wokufumana umvuzo!
Enye yezona zinto zibalaseleyo malunga nokujonga ukuhamba kwexabiso leasethi ngaphezulu kwexesha elimiselweyo kukuba uyakwazi ukufumana ulwazi oluninzi olufanelekileyo njengokutshintsha kwezorhwebo, ukuqhekeka, kunye neendlela - ngendlela enemveliso.
Endaweni yokusebenzisa isalathiso sobuchwephesha, okanye ukuqondwa kwetshathi-intengo yokurhweba isenzo malunga nokufikelela kwiziseko zokurhweba, ke ungcono ngokukujonga oku ngexesha elimiselweyo apha ngasentla.
Olunye uhlobo lohlalutyo lwamaxabiso ziitshathi zamakhandlela zaseJapan- apha, endaweni yexabiso lomntu ngamnye, oku kuya kukunika umbono odibeneyo weendaba ezaphukileyo ezisekwe kwixabiso.
Ukurhweba ngeNtengo ngeze kuphosakele
Ukuba ufumanisa ukuba ulahlekelwa yimali, njengomrhwebi, omnye wemisebenzi yakho ebaluleke kakhulu kukulawula umngcipheko ngokuvala urhwebo ukuba ufuna njalo. Iibhiliyoni zenziwa mihla le kwiimarike, ngamalungu omzimba angacingi. Kananjalo, ayingombono mhle ukuqikelela kunye nokuphendula kakhulu.
Njengomrhwebi, unokufumana ukuqonda okuhle kolawulo lomngcipheko, oya kuba linyathelo elibaluleke kakhulu lokuba ngumrhwebi ongcono ngakumbi kwixa elizayo. Intshukumo yamaxabiso ijonga kuko konke ukuhamba kwemali eyinkunzi, kwihlabathi jikelele, ngawo onke amaxesha, kubanzi malunga nokuba loluphi uluvo lwentengiso kwitshathi yemali yeetshathi.
Ngamanye amaxesha kunokuba yimeko yebhanki ezama ukulawula ukubonakaliswa kwemali. Isenokuba yinkampani enkulu ye-smartphone yase-UK ethenga iikhamera ezivela eJapan (imali ye-JPY), okanye ingxowa-mali yeinshurensi izama ukubuyisela iipotifoliyo zayo ekupheleni kwenyanga.
Imvakalelo yomngcipheko-Yonke into ekufuneka uyazi
Ngamafutshane, imeko yomngcipheko isetyenziselwa ukubonisa indlela iimarike zezemali (abo bathatha inxaxheba) abaziva ngayo nabenza ngayo. Yintoni abathengisi bayo bagqiba ekubeni bayithengise okanye bayithenge, luphawu olulungileyo lokuba banethemba lokuba baya kwenza ntoni, kwaye bazimisele ukuphulukana kangakanani.
Uvakalelo lomngcipheko sisibhengezo sobungakanani bomngcipheko abatyali mali kunye nabarhwebi abazimiseleyo ukuwuthatha. Uvavanyo lomngcipheko lufana nesimo esiqhelekileyo kwimarike yezemali xa iyonke. Ngokuziqhelanisa nesimo sengqondo sentengiso sokuba semngciphekweni uphela, oku kuya kukunika umbono malunga nomngcipheko omkhulu onokuthi uzimisele ukuwuthatha kunye neeasethi zakho kunye nemali yakho ngexesha elithile
Ewe, inkcazo yomngcipheko kukuvezwa kwengozi okanye ilahleko-ke xa unesithuba esivulekileyo kwintengiso, kukho ingozi yokuba urhwebo lwakho lunokuphela ngelahleko. Kuyaziwa ngokubanzi ukuba xa kufikwa kumngcipheko womrhwebi, zimbini izinto ezibuthathaka ngokweemvakalelo ezikhokela inkqubo yokwenza izigqibo.
Banyolukile kwaye bayoyika- intengiso yemali inakho kwaye iya kudlala kuloo nto.
Uninzi lwezinto ezenziwayo kwimarike yezemali ziqikelelwa ngokusekwe kwixesha elifutshane, ke wena uyakwazi ukuphuma ngokukhawuleza kunye nokungena kurhwebo. Ngenxa yoku, sicinga ukuba kubalulekile ukuqonda ngokupheleleyo ukuba yeyiphi imeko yomngcipheko. Ngokucacileyo, ichaza indlela yotyalomali nabarhwebi, kwaye banokuthi 'bafune ukhuseleko' okanye 'bafune umngcipheko'.
Imithombo yeendaba yezezimali ihlala isebenzisa igama elithi 'umngcipheko-ekubhekeni kuyo' kubhekisa kwindalo esingqongileyo xa intengiso 'ifuna umngcipheko'. Xa imarike ibonisa iimpawu zamaxabiso asezantsi-kunesiqhelo kumaxabiso - kokubini phezulu kwaye ezantsi - ngedatha yezoqoqosho exhasa oku, umbono uthathwa njengothembisayo- ke oku kuthetha ukuba umngcipheko 'ukhona'.
Xa kukho iimeko 'zomngcipheko', abatyali mali kunye nabarhwebi baziva benethemba elingakumbi malunga nokufuna ingeniso ephezulu, enokuthetha ukuba mhlawumbi bathengise iiasethi 'ezikhuselekileyo,' okanye bathenge 'iiasethi eziyingozi' - oko kukuthi, ukuguqula imali ibe 'ziimpahla ezinobungozi. '.
Ezinye zeasethi eziyingozi zezi zilandelayo:
Iimali eziphezulu zokuvelisa (imizekelo emibini yile, idola yase-Australia kunye neBrazil yangempela)
kunye (ngokumangalisayo) esitokisini.
Ngokufana nantoni na ebomini, ubuninzi bomngcipheko okhululekile ukuthatha, ukuphakama kweembuyekezo zakho kunokuba kunjalo. Ewe kunjalo, oku kuthetha ukuba usengozini yokuhamba ngenye indlela.
Imithombo yeendaba yezemali isebenzisa igama elithi 'umngcipheko-kude' ngokubhekisele kwindalo esingqongileyo xa imarike 'ifuna ngokukhuselekileyo'.
Ukuba iimarike zibonisa ubungakanani obuphezulu bokungazinzi, kwaye uqikelelo lwezoqoqosho lubonakala lubi okanye luyehla ngoko umngcipheko uthathwa ngokuba 'umngcipheko'. Oku kuthetha ukuba abathengisi abayi kuba namathuba okuba benze urhwebo olunobungozi.
Iziganeko ezinkulu ezinje ngengxaki enkulu yezemali (2008), ingxwabangxwaba yezopolitiko (ungquzulwano lwaseMbindi Mpuma, eqhubekayo), okanye kutshanje ingxaki yezempilo kwihlabathi liphela I-COVID-19 (2020) zonke ziya kuba nefuthe elibi kwimarike- ngenxa yoko, uluvo lwentengiso luya kuba 'semngciphekweni'.
Abarhwebi ngamanye amaxesha baba, kwaziwa njenge, 'ingozi-yokungahoyi', xa oku kusenzeka kukho ukhetho lwamanyathelo amabini abanokuwenza. Abarhwebi banokungena kwizikhundla (bathenge) ngaphakathi 'kweeasethi ezikhuselekileyo', okanye baphume kwizikhundla (bathengise) ngaphakathi 'kweeasethi eziyingozi'. Xa imarike inzima kakhulu, abatyali mali kunye nabarhwebi bahlala bejonga 'iindawo ezikhuselekileyo', ezikhuseleke ngakumbi, kwimeko apho uqoqosho luba mandundu.
Aba barhwebi kunye nabatyali mali banokuguqula ikomkhulu labo libe 'yindawo ekhuselekileyo' yeeasethi. Ngamanye amagama, ii-asethi 'zomngcipheko osezantsi' ziza nomngcipheko omncinci, kodwa kunye nemivuzo ephantsi. Ukwenza oku kuhlala kuthathwa njengeyona ndlela ikhuselekileyo yokukhusela imali ngexesha lokoyika, okanye 'ukuthintela umngcipheko'. Ngayo yonke loo nto ithethwayo, imali ebandayo enzima ithathwa njengeyona ndawo ikhuselekileyo ikhoyo.
Ukuba awuyifuni imali njengendawo yakho ekhuselekileyo, ezinye iindlela zibandakanya:
ISwiss franc (CHF)
Iibhondi zikarhulumente wase-US
idola yaseMelika (iUSD)
I-Yen yaseJapan (JPY)
Ngelixa isitokhwe ngaphakathi kokutya kwabathengi kunye necandelo lezononophelo lwempilo zithathwa njengendawo ekhuselekileyo kubathengisi bempahla (ngenye indlela eyaziwa ngokuba 'ziiasethi zokuzikhusela').
Isizathu sokuba la macandelo athathwe njengeendawo ezikhuselekileyo kukuba ayinamsebenzi nemo yoqoqosho, iinkampani ezisebenza phakathi kwala macandelo zibonelela ngeemveliso eziyimfuneko ezisoloko zifunwa ngabantu.
Ngaba ubungozi bokuva ubungozi bubalulekile?
Ewe ubungozi bokubaluleke kakhulu, ukuba nolwazi olusisiseko loku kuyakukunceda ekulawuleni iimvakalelo zakho kunye nomngcipheko, kwaye kuya kukunceda ekugcineni ikapitali yakho. Iimarike zihlala zihla zinyuka mihla le okanye ngeveki, oku luphawu olulungileyo lotshintsho kwimvakalelo yomngcipheko- oku kufanele kukuncede ube nokuqonda okungcono kwesizathu sokuba intengiso isebenza ngendlela eyiyo.
Imvakalelo yomngcipheko inokutshintsha ngokuthe ngcembe, okanye ngamanye amaxesha ngesantya esikhawulezayo. Olu lwazi okanye ukuqonda okusisiseko kwemeko yomngcipheko kuya kukunceda ukuba uqonde iindaba zezezimali, idatha yezoqoqosho, kwaye uhlale uzolile xa ujongene nokwehla. Iimakethi ngamanye amaxesha zinokutshintshela ngokukhawuleza kwimodi 'yomngcipheko', emva kokuba 'semngciphekweni' kangangeentsuku, okanye ngamanye amaxesha iinyanga. Ukujonga iindaba zeemarike ngokusebenzisa imeko yomngcipheko kuya kukunceda ukuba uqonde ukudideka kunye nokungahambi kakuhle kweziganeko kwiindaba zentengiso.
Ukuba kukho ukukhutshwa kwedatha yezoqoqosho engacacanga xa kuziwa ekwenzeni imeko yezoqoqosho ibe ngcono, kunokubakho isiphumo esincinci kwimo yomngcipheko. Ke ngoko, iimpembelelo zeendaba ziya kwenza umahluko kutshintsho lweemvakalelo zomngcipheko, ngenxa yoko imarike inokuqhubeka nokuthenga ii-asethi eziyingozi kwaye ingakhathaleli idatha ebonisiweyo.
Enye into enokuthi ibenempembelelo enkulu kwiimvakalelo zomngcipheko imbi kunesiphumo esingalindelekanga. Olu lukhululo lwedatha yokusingqongileyo kwezoqoqosho (njenge-NFP) ebhekisa kwicandelo elehlayo okanye kwindawo yentengiso.
Imali eyinkunzi izakuhamba iye kwiiasethi ezikhuselekileyo, ukusuka kumngcipheko-kunye notshintsho lweemvakalelo zomngcipheko ukuya 'kumngcipheko', ukusuka 'kumngcipheko-on'. Ngokukhawuleza ukuba iimarike ziye kwimodi 'yokubeka emngciphekweni' amaxhalanga aya kube ehamba-hamba, ethengisa izinto ezinobungozi kwaye abambelele kwii-asethi ezikhuselekileyo. Kwiimeko ezimbi kakhulu, amaxabiso aya kuwa, kwaye ngokukhawuleza - imeko yeyona meko ibalaseleyo kukuba ukurhweba kwamanyathelo entengo kuya kuthintelwa, kumiswe nakuphi na ukuphakama okukhulu.
Ukulinganisa ukuziva ubungozi
Ukuqinisekisa ukuba uyakwazi ukuliqonda ngokupheleleyo ifuthe lokuziva ubungozi, apha ngezantsi sidwelise ezinye zeemetrikhi eziphambili ekufuneka uzijongile xa urhweba neemeko zentengiso ebukhoma- nokuba ukwi 'risk-off' okanye 'usemngciphekweni'.
Ngaphandle koko yaziwa njenge-VIX; la manyathelo eemarike ezithile ezinxulumene nokungazinzi, kunye namathuba okwenza intshukumo engalindelekanga okanye ngequbuliso kwixabiso.
I-VIX iya kukunceda uqonde inqanaba lomngcipheko (nokuba ucimile okanye ucimile) esitokisini. Isalathiso se-VIX sikwabizwa ngokuba 'sisalathiso sokwesaba' okanye 'gauge yoyika'. Kukwanjalo nawesed ukumisela inqanaba lentengiso lexhala ngabarhwebi bezinto kunye nabarhwebi abanokukhetha. Kananjalo, le yenye yezona indexes zixhaphakileyo zokungazinzi kwintengiso iphela.
Okukhona isezantsi i-VIX, kokukhona imarike ingaphantsi kufuneka yoyike, kokukhona inyuka i-VIX, kokukhona intengiso iyoyika.
Ukulindelwa kweemarike kokungazinzi okuqhubela phambili kulinganiswa kwi-S & P Index. Umzekelo we-FOo, ukuba i-VIX inika ixabiso elingaphantsi kwama-20, oko kuthathwa njengokuthoba umoya, ngelixa ixabiso elingaphezulu kwama-30 libonwa njengelingaqinisekanga.
I-US Stock Index
Isalathiso sentengiso sesinye sezona ndawo zicacileyo zexesha lokwenyani lokugcina iso.
Phakathi kwezona zalathiso zibanzi ngokubanzi zase-US zezi;
I-DJIA (Umndilili weDow Jones woShishino)
Ezi zalathiso zizalathiso kuqoqosho lwehlabathi liphela, hayi i-US kuphela
Unokufumana iingxelo kwicala lezalathiso, amaxesha ngamaxesha ngemini yokufumana indawo kwimithombo yeendaba ezinjengeBloomberg kunye ne-CNBC. Xa izalathiso zesitokhwe kubhekiswa kuzo njengehla 'ezantsi', oku kuthetha umngcipheko ukuba 'ucimile', kwelinye icala xa 'benyukile', umngcipheko 'uvuliwe'.
Ebhekiswa njengoNondyebo wase-US, iSebe lezeMali lase-US liya kukhupha iibhondi zalo unyaka wonke. Ezi bhondi ziya kukhutshwa ukuze kunyuswe imali ukuze kuxhaswe imisebenzi yemihla ngemihla okanye iiprojekthi. Xa kufikwa kutyalo mali, oonondyebo baseMelika bathathelwa ingqalelo ukuba bakufutshane nomngcipheko njengoko ungenakho, yiyo loo nto bahlala becingelwa njengeeasethi ezikhuselekileyo.
Zintathu iindidi zokhuselo lwengeniso esisigxina ezisetyenziselwa ukuxhasa ngemali urhulumente wase-US, zezi:
Ngamnye kubo uhlawula inzala ngendlela eyahlukileyo, kwaye nganye inenqanaba lokukhula elichaseneyo, oku kunokuba naphi na ukusuka kwiiveki ezine ukuya ngamanye amaxesha amashumi amathathu eminyaka. Ukugcina unolwazi, uya kufumana iingxelo ngezivuno zezi zinto ziya kunikwa ingxelo ngazo kumajelo eendaba ezemali.
Xa isivuno siphezulu, unokuqiniseka ukuba intengiso ithengisa ityala likarhulumente wase-US. Kungenxa yokuba ngokwenza oku amaxabiso azakwehla, oko kuthetha ukuba baphucula isivuno sabo. Xa kuthengiswa iasethi engenabungozi efana nale, oko kuthetha ukuba baziva bethembekile ngayo, ke imeko yengozi iyatshintsha ukusuka 'emngciphekweni' ukuya 'kumngcipheko'.
Ukuba kwelinye icala isivuno siphantsi, okwahlukileyo kuyinyani, umngcipheko unokutshintsha ube 'semngciphekweni, kuba luphawu lokoyika, ngenxa yentengiso ethenga ityala likarhulumente endaweni yoko. Inyanzela amaxabiso ukuba anyuke, nto leyo eya kuthi inciphise isivuno.
Imali ekhuselekileyo yeZemali
Iimali ezikhuselekileyo zokukhusela zisabela ngokukhawuleza kwiinguqulelo zomngcipheko, ngenxa yokuba zinobuthathaka kakhulu kutshintsho olunje - ezi mali zilindele ukuba ixabiso lonyuke, okanye ligcine ixabiso lalo kwimeko-bungozi.
Uyakwazi ukugcina iliso kwimingcipheko yeeyure ezingama-24 ngosuku kuba ngokungafaniyo nemarike yemasheya yase-US, indawo ye-forex ivulekile nge-24/7.
Swiss uFranc (CHF)
I-franc yaseSwitzerland (CHF) yomelele kakhulu. Nangona iimarike zezemali zehlabathi ziye zahlangabezana neengxaki ezininzi kwiminyaka edlulileyo, iSwitzerland igcine ukubambelela ngokuqinileyo.
I-CHF yindawo yemali ekhuselekileyo ngenxa yoqoqosho oluzinzileyo, uzinzo kwezopolitiko kunye nomgaqo-nkqubo wezemali ovakalayo. Abatyalomali bamanye amazwe bade baziwa ukuba babhenele eSwitzerland ngamaxesha obunzima bezezimali.
Umqondiso oqinisekileyo wokuba kukho ukuphazamiseka kwemarike (kuhlala eYurophu), kuxa i-CHF yomelele kuneemali eziphezulu ezivunayo. Oku kuhlala kukhokelela kubarhwebi bemali ukuba babalekele kukhuseleko olufanelekileyo lwe-CHF.
Eli nyathelo libonisa imeko 'yomngcipheko'.
Idola yaseMelika (i-USD)
Lo ngumzekelo olungileyo weemvakalelo 'zomngcipheko', ngenxa yamandla e-USD. Ukuba iindaba ziyaxela ukuba i-USD yomelele kuneyona mali inesivuno esikhulu, ngawo onke ama-akhawunti, imakethi ayizukukholiswa ziindaba zezemali zakutshanje kunye nedatha yezoqoqosho.
Oku kuhlala kukhokelela kwiimarike ezifuna i-USD njengendawo ekhuselekileyo. Ukuze ube nakho ukuthenga ubuncwane base-US njengendawo yakho ekhuselekileyo, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka uthenge i-USD (ukuba awunayo) Ixabiso le-USD liya kuvela xa inani labatyali mali bekwenza oku ngaxeshanye.
Lo ngomnye umzekelo woluvo 'lomngcipheko'. Ke, ukuba ingxelo ithi i-Yen yaseJapan yomelele kunezezimali eziphezulu ezinesivuno- kwakhona, iimarike zisenokungakholiswa yidatha okanye iindaba, kwaye kusenokwenzeka ukuba zifune i-JPY njengendawo ekhuselekileyo (ngakumbi ukuba iindaba zinxulumene ne-USD) .
Izibini ezimbini zemali kulungile ukugcina iliso lethu NZD / JPY kwaye kwakhona Aud / JPY. Okubaluleke kakhulu, ezi zibini zimbini zithandwa kakhulu 'zokuphatha' urhwebo (oku kuya kubhekiswa kuko njengomngcipheko kwiqhinga). Ukuhla ngequbuliso kwezi zibini zemali zingaba luphawu lokuchasa umngcipheko.
Ngenxa yokungaqiniseki okungathethekiyo kwihlabathi ngoku, kuya kubakho ubalekela kukhuseleko, mhlawumbi ukuya kwi-USD, JPY kunye ne-CHF. Xa i-NZD / JPY kunye ne-AUD / JPY zikhula, oku luphawu olucacileyo lokuba uvavanyo lomngcipheko ngoku 'lukukubeka umngcipheko'
Akukho nto i-100% kwiRisk-Free
Siyaxolisa ukuyiphula, kodwa ke kufuneka kuthiwe, kakhulu njengee-unicorn, i-100% yeasethi engenamngcipheko hayi zikhona. Akukho asethi iya kukhuseleka ngokusisigxina kwaye akunakwenzeka ukuba ube yi-100% 'umngcipheko'.
Xa kufikwa kwimali ebandayo ebandayo, ngelishwa, usajongana nomngcipheko wokuba amandla akho okuthenga ancitshiswe ngokuthe chu kukunyuka kwamaxabiso. Obo bungozi buya kuhlala bukhona-Inene 'umngcipheko-on' kunye 'nomngcipheko-ngaphandle' ziintetho nje ezichaza imeko yentengiso.
Ukuze ikwazi ukumisela kwangaphambili iipateni kwaye ichonge okunokwenzeka kwixesha elizayo, uhlalutyo lobuchwephesha luphononongo lwezenzo zamaxabiso kwimbali. Ukuchonga iipateni kunye nokwenzeka kweentshukumo ezizayo. Uhlalutyo lobuGcisa lusebenzisa itshathi yamaxabiso njengendlela yokumisela kwangaphambili umfutho, inkxaso kunye nokumelana. Oku kunceda abarhwebi ekungeneni nasekuphumeni kwezorhwebo ezinamathuba aphezulu.
Ngokwesiqhelo, ipateni emiselweyo iya kulandelwa kukuhamba kwexabiso kunye neendlela ezivelayo. Ipateni emiselweyo yinxalenye yokubulela kwimarike phycology. Umbono kukuba amalungu kwiimarike ahlala esabela ngendlela efanayo xa ejongene nemeko efanayo. Uhlalutyo lobuchwephesha lusebenzisa izikhombisi zobuchwephesha kunye neetshathi zamaxabiso ukuze kubonwe naziphi na iipateni, ezinokuthi zisetyenziswe njengesiseko sokurhweba ukuphuma / ukungena. Uhlalutyo lobuchwephesha alusoze luzame ukulinganisa ixabiso leasethi.
Umahluko omkhulu phakathi kohlalutyo olusisiseko kunye nohlalutyo lobuchwephesha kukuba uhlalutyo lobuchwephesha lungasebenzisa umthamo wembali kunye nedatha yamaxabiso, kanti uhlalutyo olusisiseko alunakho. Uhlalutyo lobuchwephesha lujolise kwingqwalaselo yexesha elizayo, ke ukuhlalutya imbali yamanyathelo entengo kuwabeka endaweni entle yokuqikelela ukuhamba kwexabiso kunye nemikhwa yorhwebo kwikamva.
Kukholelwa ngokubanzi phakathi kwabathengisi be-forex abahlala besebenzisa uhlalutyo lobugcisa, ukuba iipateni zexabiso zihlala zihlala ziphinda ziphinda ziqhubeke phantsi komgca. Oku kubenza ukuba baphonononge isibini semali kunye nokuhamba kwamaxabiso okwenziwe ngaphambili-olu lwazi luya kujongwa xa kusenziwa isigqibo sokuphuma okanye sokungena kwisikhundla.
Owona ndoqo wohlalutyo lobuchwephesha kukuba endaweni yokugxininisa kuhlalutyo lwamanani okuhamba kwexabiso, ixabiso le-asethi linokubonisa ulwazi esele lukhona. Uhlalutyo lonikezelo lweemarike kunye neemfuno ziya kuxela ukuba leliphi icala eliya kuthi lihambe khona.
Eyona hypothesis iphambili yohlalutyo lobuchwephesha zezi zilandelayo:
Abarhwebi banokubona ukuba bayathengisa okanye abayithengisi inzala, okanye ukuthenga inzala kuyanda okanye kuyancipha.
Uyakwazi ukugqiba ngento ocinga ukuba abathathi-nxaxheba kwimarike banokuceba ukuyenza ngokulandelayo
Unokuqonda okungcono malunga nokuba abathengisi nabathengi banokucinga ntoni, ngenxa yamaxabiso akutshanje aphuyiweyo.
Uhlalutyo lobuchwephesha lusekwe kule migaqo mithathu:
Iimpawu kunye nokuhamba kwexabiso
'Izinto ezisisiseko', okanye iimeko zoqoqosho olukhulu ziya kufakwa ngokuzenzekelayo kwixabiso lesibini semali. Iimarike ziphawula yonke into. Iziganeko ezinjengeengxelo zengqesho kunye nexabiso lenzala ziya kufakwa kwixabiso ngokuzenzekelayo, ngenxa yabathengi kunye nabathengisi abakwiimarike.
Kuhlala kucingwa ukuba ngokwamaxabiso amaxabiso, imbali luphawu oluhle lwezinto ezizayo, kwaye zihlala zibuyela umva.
Iinjongo zoHlahlelo lobuGcisa
Ukujonga amanani kunye naziphi na iipateni zentengiso ezikhulayo, kunye nenzuzo kurhwebo.
Xa imarike iqala ukutshintsha, uhlalutyo lobuchwephesha luya kwazi ukuba lingene nini okanye liphuma nini kwintengiso.
Ukwenza izigqibo ezizizo kurhwebo, ngaphandle kokuqwalaselwa ngokweemvakalelo.
Ke, inde kwaye imfutshane yile, ukuba uhlalutyo lobuchwephesha luya kuchonga imeko, ilandelwe yinkxaso kunye nokuchasana nemarike. Oku ngokusebenzisa amaxesha, okanye amaxabiso eetshathi.
Ngokusisiseko, xa kufikwa kwiimarike, banokukhetha ezintathu kuphela -ukuhla, uye phezulu, okanye ushenxe ecaleni. Ngokubanzi, amaxabiso aya kuhamba kwi-zig-zag, kuba eli nyathelo lamaxabiso linama-2 kuphela athi:
utyekeloAmaxabiso ama-zig-zag asezantsi kwidowntrend okanye ngaphezulu kwi-uptrend.
uluhlu: Amaxabiso e-zig-zag ecaleni.
Uhlalutyo lobuchwephesha lusebenzisa iintlobo ezintathu zezixhobo kunye nobuchule:
Indicators TechnicalUkuthenga nokuthengisa imiqondiso, kusetyenziswa izixhobo zobalo.
Iipateni zeTshathi: Ukuxela kwangaphambili ukuba amaxabiso aphethwe phi ngokujonga iipateni ezinkulu zetshathi.
Inyathelo lamaxabiso: Ukuzoba imigca yetshathi njl.njl.ukuchonga ukuba intengiso ingena kweliphi icala, kwaye oku kwenziwa ngokuvavanya ukunyakaza kwexabiso elidlulileyo.
Ke oko kucenga umbuzo- ngaba uhlalutyo lobuchwephesha lubalulekile? Kwicandelo elilandelayo, siphonononga le mvakalelo ngakumbi.
Ngaba Uhlalutyo lobuGcisa lubalulekile?
Ewe yiyo. Uhlalutyo lobuchwephesha alunokukunceda kuphela ekubeni uthathe isigqibo sokuba uza kuphuma nini kwaye nini kurhwebo kodwa nokuba uza kungena nini okanye nini.
Ngokuchonga iipateni zexesha elidlulileyo ezinokuthi ziphindwe, uhlalutyo lobuchwephesha sisixhobo esiluncedo kakhulu xa kufikwa ekuchongeni amathuba anokwenzeka kunye nokukhetha amashishini aneengxaki ezilungileyo.
Kunzima kakhulu ukuhlala unenzuzo ngalo lonke ixesha njengoko linjalo, kodwa ngaphandle kokusebenzisa ulawulo lomngcipheko, singathi kusondele akunakwenzeka.
Iipateni zetshathi zezona zinto ziphambili kuhlalutyo lobuchwephesha; usebenzisa amagophe okanye imigca eliqela, ipateni yetshathi ngumboniso ocacileyo wokuhamba kwexabiso. Izinto ezinjengokuziphatha komntu kunokubangela ukuhla kwexabiso leasethi yezemali, kwaye ezi patheni zisisiseko sohlalutyo lobuchwephesha kwaye zinceda ekuchongeni intshukumo yokuhamba kunye nexabiso leasethi.
Ukuba ungumrhwebi ngokwakho, uya kwazi ukuba ukuba nezakhono kunye nokuqonda kwendlela yokubona iipateni kunokuwaphucula kakhulu amathuba akho okuqikelela ukuba ixabiso elichaphazelekayo liya kuhamba phi. Uhlobo olusetyenziswa ngokuxhaphakileyo lwetshathi ngumgaqo wokuhamba, kodwa zikhona ezinye, ezinje ngeepennants, iiflegi, iidges, izihloko ezibini eziphindwe kathathu (kunye neebhotile), kunye nentloko kunye namagxa.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iipateni zinokwenziwa nakweliphi na ixesha lexesha ukusuka kwimizuzwana ukuya kwiinyanga, ngamanye amaxesha amakhalane aya kongezwa kwibar, umgca okanye itshathi yesibane. Umzekelo wetshathi awusekelwanga kwisayensi okanye kwi-physics, impumelelo yabo ixhomekeke kakhulu kwinani labathathi-nxaxheba kwimarike abayithathela ingqalelo.
Ezi ntlobo zimbini zeepateni zetshathi ezikhoyo zezi zilandelayo:
Iipateni zokuqhubeka kwetshathi: Iipateni zokuqhubeka eziqhelekileyo zibandakanya iipateni zeflegi, iipateni zepennant, kunye neepateni zonxantathu- Le patheni inceda abathengisi ukuba babeke amathuba ukuze bakwazi ukuqhubeka nomkhwa.
Ukutshintsha iipateni zeTshathi: Ibinzana eliqhelekileyo elisetyenzisiweyo "umkhwa ngumhlobo wakho ude udibane". Iipateni eziguqulwayo zizama ukufumana apho kugqityiwe khona iindlela, ke ngokuchasene ngokupheleleyo neepateni zokuqhubeka. Injongo yoku kukufumana amathuba okurhweba ngokuguqula imeko ethile.
Ezimbalwa zeepateni ezisetyenziselwa ukubuyisa umva zibandakanya:
Ezi patheni zisebenza kakuhle ngenxa yeephatheni zenyani ezisebenza kumaxesha ahlukeneyo, njengoko eyinyani (iphethini ephindaphindayo, phakathi kweentshukumo ezinkulu zamaxabiso).
Imvumelwano ngokubanzi yabarhwebi bobuchwephesha kukuba ixabiso libonisa lonke ulwazi olubalulekileyo olufana nexabiso elifanelekileyo, kunye nokuthengisa. Iipateni zetshathi zifunda lonke udidi lweeasethi, ukusuka kwiimali, izitokhwe, iibhondi kunye nezinto zorhwebo ukuya kwii-cryptocurrensets.
I-psychology yeNtengiso iyinto eqhuba iipateni zetshathi. Onke amaxabiso kunye nokwakheka kwawo kubonakaliswa kukuthengisa kunye noxinzelelo lokuthenga (usebenzisa isikhokelo sokuzoba). Amandla okuhlala adlala indima enkulu ekubumbeni la maxabiso kukubonelela kunye neemfuno.
Imithetho yendalo yonke yokubonelela kunye nemfuno kunye neemvakalelo zithetha ukuba ayinamsebenzi ukuba leliphi ixesha elimiselweyo ogqiba ngalo ukuba uthengise iipateni zetshathi, kungenxa yokuba iiodolo ziya kudluliselwa phambili ngabantu.
Apha sidwelise amanyathelo amathathu akhokelayo kwindlela ephezulu yokuhla kwiipateni zetshathi yokuthengisa:
Xa usenza isigqibo malunga nexesha onqwenela ukurhweba ngalo, soloko ukhumbula ukuba uluhlobo luni lomrhwebi.
Umzekelo, itshathi yemihla ngemihla, kunye ne-4hr zinokusetyenziselwa ukwenza i-scalp kwintengiso, okanye Ukuguqula ukurhweba.
I-5 kunye ne-15 yemizuzu yeetshathi zangaphakathi zisetyenziselwa scalping kwimarike, kunye urhwebo usuku.
Ixesha leveki-lenyanga lilungile kurhwebo lokuma
Kuxhomekeka kwisakhelo sexesha olikhethileyo, kuya kufuneka uchonge eyona nto iphambili ngelo xesha.
Xa sele ubonile imeko ebalaseleyo, emva koko unokuchonga iipateni zetshathi ukulungiselela ixesha lokuthengisa.
Ungaze uthengise ngokusesikweni ngokusekelwe kwiipateni zetshathi, ngaphandle kokuba unesakhelo esisekwe njengeyona nto yokugqibela oyifunayo kukuphelisa ukuthengisa ngokusekwe kwiimvakalelo zakho kuphela.
Inkcazo yeencwadi zokuthengisa kunye noluhlu
Ukuba unqwenela ukuzifundisa ngakumbi ngokurhweba ngamanyathelo amaxabiso, senze uluhlu lweencwadi esicinga ukuba zonke kufuneka zifundwe.
🥇 Ukurhweba ngokuphila: I-Phycology, ukuThengisa, ubuChule, ukuPhathwa kweMali-ngu-Alexander Elder
Le ncwadi ichukunyiswe kakhulu zii-3 M's; imali, ingqondo, kunye nendlela. Xa 'urhweba ngokuphila' ungaziqonda zontathu ezi zinto.
Le ncwadi ilungele ukuqeqesha ingqondo yakho, ichaza iindlela zorhwebo, kwaye ikukhokele kwindlela yokulawula ngcono imali kwiiakhawunti zakho zorhwebo.
🥇 Ngena kwigumbi lam lokurhweba: Isikhokelo esigqibeleleyo kurhwebo- ngu-Alexandar Elder
UGqr Alexander ugubungela yonke into ukusuka kulawulo ngokubanzi lwexesha, isicwangciso kunye nemali yorhwebo, ukuya ekubonakaliseni izikhombisi ezinokuthi zikhokelele kwinzuzo engaguquguqukiyo.
Ukusuka kwiziseko zokurhweba ukuya kwiindlela ze-phycological, le ncwadi ijolise ekwenzeni nawuphi na umndilili wejoe kumrhwebi ophumeleleyo.
🥇 Ukurhweba kuMmandla: Yazi kakuhle iMarike ngokuzithemba, uQeqesho, kunye neNdlela yokuPhumelela- nguMark Douglas
Umbhali wale ncwadi, uMark Douglas, ungumrhwebi osisilumko kakhulu, umcebisi kumzi mveliso kunye nomqeqeshi kwezorhwebo.
Kukho imiba emihlanu ephambili ebandakanya le ncwadi, ukwenzela ukuba abathengisi baziqonde ngcono kunye nendlela abarhweba ngayo. Injongo apha kukunceda abathengisi xa kufikwa ekukhetheni isitokhwe, iintsomi malunga nentengiso, kwaye ngethemba lokunyusa inzuzo
🥇 Rhweba ngeNdlela yakho kwiNkululeko yezeziMali- nguVan K. Tharp
Olu luvo lokwenyani lwendlela yokuthengisa kwintengiso, kunye nenkcazo enkulu yemigibe eqhelekileyo, kwiingcebiso zokuba ngumrhwebi ophumeleleyo, le ncwadi ifundwe kakhulu.
Akukho myalelo ubalulekileyo, eyona nto kugxilwe kuyo kule ncwadi zezi zilandelayo: Uyenza njani inkqubo yakho, indlela evulekileyo yokucinga, iindlela zokuphuma kunye nokulindela okuhle.
Tech Iindlela zokuTshata zezibane zeJapan - nguSteve Nison
USteve Nison unamava eminyaka kule ndlela ithandwayo yohlalutyo lobuchwephesha. Ifaka yonke into ekwakheni izibane kunye nokuqonda iipateni ngeendlela ezahlukeneyo zobugcisa, le ncwadi ifundwe kakhulu.
Olu lushicilelo lwe-2, kwaye lucacisa yonke into ngokwemigaqo kaLayman kwabo kuni abangazokwazi ukuba baqale ngaphi ngeetshathi zezibane!
Abarhwebi abaGqwesileyo kunye namaQonga amaXabiso oRhwebo ngeNtengo
Ukuba ukwazile ukuyenza le nto ukuza kuthi ga ngoku - kuya kufuneka ngoku uqonde ngokuqinileyo ukuba yeyiphi intengo yokurhweba, kwaye kutheni uninzi lwabathengisi abanamava befunga ngalo njengesicwangciso esilixesha elifutshane nelide.
Kananjalo, isiqwenga sokugqibela sephazili kukufumana umrhwebi okwi-Intanethi onokusebenzisa isicwangciso-qhinga sokurhweba ngamaxabiso esanda kufunda. Apha ngezantsi uyakufumana amaqonga amahlanu ngokukodwa - onke anikezela ngemfumba yeeklasi zeasethi, iifizi eziphantsi, kunye nesakhelo esingqongqo solawulo.
1. I-AVATrade- 2 x $ 200 yeBhonasi eyamkelekileyo
I-AVATrade lukhetho olukhulu ukuba ujonge ukwenza urhwebo ngezenzo zamaxabiso. Umrhwebi ubonelela ngenkxaso epheleleyo yeMT4-onokuyisebenzisa nge-akhawunti yedemo yeqonga. Ke, xa ukulungele ukurhweba kwiimeko zentengiso ebukhoma, ungaqhubeka uvule iakhawunti yemali yokwenyani.
I-AVATrade ayihlawulisi naziphi na iikhomishini zorhwebo, kwaye ukusasazeka kuphezulu kakhulu. Ngapha koko, unokurhweba ngababini abakhulu be-forex ekusasazeni iipipsi ze-0.9, ezinokhuphiswano olukhulu. Eyona nto ilunge kakhulu, abathengi abatsha banikwa iphakheji eyamkelekileyo yokutyikitya nje!
Isishwankathelo, ukuthengiswa kwamanyathelo entengo kuphazamisa uninzi lweencwadi zoncwadi-njengoko izama ukukubuyisela kwiziseko. Oko kukuthi, ithiyori ifundisa ngokulula - kude ukuba unike ingqalelo kwinto eyenzekayo apha nakweli xesha langoku-ngokuchasene nokujolisa ngokukodwa kwixesha elidlulileyo.
Kananjalo, siyathemba ukuba ngokufunda isikhokelo sethu ngokupheleleyo, ngoku uqonda ngokuqinileyo ukuba yeyiphi intengo yokurhweba ngamaxabiso, kwaye kutheni kubalulekile ukuba ukwazi ukuhamba kwexesha.
Loluphi uhlobo lokurhweba ngamaxabiso entengo afanelekileyo?
Kwiimeko ezininzi, urhwebo ngamanyathelo entengo alungele ukurhweba ixesha eliphakathi ukuya kwelide. Oku kunokuba, umzekelo, kugxilwe kuthengiso lokurhweba. Nangona kunjalo, abaninzi banokuphikisa ukuba abathengisi bemini banokusebenzisa ngokupheleleyo ukurhweba ngamanyathelo-njengoko uninzi lwethiyori luhlala luhleli.
Ngaba kusafuneka ndifunde uhlalutyo lobuchwephesha?
Ngamafutshane-ewe, uhlalutyo lobuchwephesha kusafuneka ludlale indima enkulu kwimizamo yakho yexesha elide.
Zeziphi iiasethi zokurhweba ngamaxabiso ezinto ezifanelekileyo?
Intengiso yesenzo sexabiso siyasebenza kuzo zonke iiklasi zeeasethi. Emva kwayo yonke loo nto, ithiyori-kwaye ayisiyiyo inkqubo yenkqubo.
Ngaba ukurhweba ngamanani amaxabiso kufanelekile kubaqalayo?
Ewe nohayi. Kwelinye icala, ukurhweba ngamanani amaxabiso sisicwangciso ekufuneka sisetyenziswe ngabarhwebi bazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Ngale nto ithethwayo, kungathatha ixesha elide ukuyazi kakuhle-ke funda!
Ndingafunda phi ngakumbi malunga nokuthengisa ngexabiso lentengo?
Sidwelise ezinye zezona ncwadi zibalulekileyo zorhwebo ezenziwa ngoku kwiimarike eziqhubeka kweli phepha.
Ngaba ukuthengiswa kwamanyathelo entengo kuphela ukungena kwimarike?